Raspberry Frozen Berry Liqueur - မည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်နည်း လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဆောင်းရာသီအထိသိုလှောင်ရန်အတွက် - Raspberry ရာသီတွင်အိမ်ရှင်မများစွာသည်အေးခဲစေရန်ကျန်းမာသောအသီးများကိုလွှတ်လိုက်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများမှအားလပ်ရက်များတွင်သင်လုပ်နိုင်သောအရသာရှိသောအရက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အချိုရည်သည်ချိုမြိန်သည်၊ အရသာရှိပြီးအရသာအရသာရှိပြီးထွက်ပေါ်လာသောအခါရေခဲနှင့်တုတ်ချောင်းပေါင်းထည့်ပါကအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာထင်ရှားသည်။ သစ်ကြမ်းပိုး.
အိမ်လုပ် Raspberry အရက်သည် aperitifs နှင့် cocktails အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကောင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နှစ်သစ်ကူးအကြိုညတွင်၎င်းကိုရှမ်ပိန်ထဲသို့ထည့်ပြီးသင်မမျှော်လင့်သောအရသာကိုရနိုင်သည်။ က အိမ်လုပ်အရက်ပါစေ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။
2 stack ။ ရေ;
2 stack ။ သကြား
800 gr အေးခဲနေသော Raspberry (နွေရာသီတွင်လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ချက်ပြုတ်ပါ)၊
1 /4stack ။ သံပုရာဖျော်ရည်၊
6 stack ။ ဗော့ဒ်ကာ။
Raspberry အရက်ချက်ပြုတ်နည်း - အိမ်စာ
1 ။ Raspberry ရေခဲသေတ္တာမှတိုက်ရိုက်လောင်းပါ။ မှသတ်မှတ်ထားသောဖျော်ရည်နှုန်းကိုညှစ်ပါ ရှောကျသီး။ ဗော့ဒ်ကာကိုဖြည့်ပါ။ ရှည်လျားသောလက်ကိုင်အပေါ်တစ် ဦး တံတွေးနှင့်အတူညင်ညင်သာသာရောမွှေပါ။
2 ။ အိုးတလုံးကိုပိတ်ပြီးအေးမြ။ မှောင်မိုက်သောထောင့်တွင်တစ်ပတ်ထားပါ။ အရေးကြီးပြီးပြည့်စုံသောနေရောင်ခြည်မရရှိခြင်း။
3 ။ ထို့အပြင်အိမ်လုပ် Raspberry အရက်များအတွက်နည်းစနစ်အရဒုတိယအပတ်အတွက်သကြားရည်ထည့်ပါ။ ရေနှင့်သကြားအပိုင်းအစများရော၊ အပူပါ၊ အစဉ်မပြတ်မွှေပါ။ ရည်အအေးခံရသောအခါ, သီးမှကူးတို့။
4 ။ အေးခဲနေသော Raspberry မှအိမ်လုပ်အရက်၊ အခြား2ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင်တစ်နေရာတည်းတွင်ရောနှောထားပါ။ ၂ ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်လောက်လုံလောက်စွာသောက်နိုင်သည့်ခွက်ကိုလှုပ်ခါသင့်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
5 ။ အခုဆိုရင် Raspberry ယမကာကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစသုံးလွှာကိုဖြတ်ပြီးနှစ်ကြိမ်စစ်ထုတ်ပြီးလှပတဲ့ပုလင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ အဆိုပါမှော်သောက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ!
ဗီဒီယိုစာရွက်ကိုကြည့်ပါကအေးခဲနေသောအသီးမှ Raspberry ယမကာကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း၊ အပြည့်အဝဖြေကြားနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
အိမ်လုပ် Raspberry လက်ငင်းအရက်
67 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,301 စက္ကန့်ကျော် Generate ။